नारी स्वास्थ्य Archives - Nari Post
You are at :Home»Category: "नारी स्वास्थ्य"
Category : नारी स्वास्थ्य
गर्भबाट बाबुलाई चिठ्ठी !
naripost 02 Mar 20200Views
नारि पोस्ट – १९,फागुन । “बाबा म अहिले गर्भमा हुर्किरहेको छु, हजुरले आमालाई पोसिलो खाने कुरा उपलब्ध गराउनुहोला ? आमाले सो खाएमा म र आमाको ...
naripost 01 Mar 20200Views
नारि पोस्ट-१८,फागुन । जिल्लामा रहेका ५२ स्वास्थ्य संस्थाले ‘बर्थिङ सेन्टर’सञ्चालनमा ल्याएपछि सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको ...
नारि पोस्ट-१८,फागुन । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट आज सप्तरीमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । घाँस काट्न आरक्षमा गएकी सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–५ ...
निःशुल्क पाठेघर शिविर
नारि पोस्ट-१८,फागुन । बेसीशहर नगरपालिका–६ चण्डीस्थानमा शनिबार सञ्चालित निःशुल्क पाठेघर शिविरमा ११४ लाभान्वित भएका छन् । वडाभित्रका महिलालाई सेवा दिने उद्देश्यले सामुदायिक सेवा सिकाइ परियोजनाअन्तर्गत ...
naripost 29 Feb 20200Views
नारि पोस्ट-१२,फागुन ।जिल्लामा रहेका ५२ स्वास्थ्य संस्थाले ‘बर्थिङ सेन्टर’सञ्चालनमा ल्याएपछि सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या ...
गर्भपतन सेवा अस्थायी साधन बन्दै
naripost 28 Feb 20200Views
नारी पोस्ट-१६फागुन । निःशुल्क सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा पछिल्लो समय अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । यहाँका १८ स्वास्थ्य सस्थाले आइपास नेपाल ...
naripost 25 Feb 20200Views
नारि पोस्ट-१३,फागुन । जिल्ला कारागार दैलेखमा रहेका १२ कैदीबन्दी र एक थुनुवा महिलामध्ये नौ जनामा आत्तिने र दुई जनामा अवसाद (डिप्रेसन)को समस्या देखिएको छ । ...
सुत्केरीको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार
naripost 23 Feb 20200Views
नारि पोस्ट -११,माघ । महाकाली नगरपालिका–१ की एक सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी भएकी ३२ वर्षीया कौसिला धामीको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको ...
naripost 13 Feb 20200Views
नारि पोस्ट-१,फागुन । महिनावारीको समयमा छात्रालाई विद्यालय आउने वातावरण बनाउन तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराएको छ । महिनावारी हुँदा विद्यालयमा गयल ...
naripost 22 Jan 20200Views
नारि पोस्ट-०८ ,माघ । बझाङमा एक सुत्केरी महिलाको हेलिकप्टरमार्फत माघ ६ गते उद्धार गरिएको छ । जिल्लाको थलारा गाउँपालिका वडा नं ८ कि २३ वर्षीया ...
बालिका बलात्कारको गलत रिपोर्ट दिने दुई डाक्टर कारबाहीमा
६ महिनामा १९ बालिका बलात्कृत
हिंसा नियन्त्रणका लागि विद्यालयबाट अभियान थाल्नुपर्ने
आमा र शिशुको सुरक्षाका लागि पाँचवर्षे परियोजना
१३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या